घरमा यी ६ चिज राख्नले मिल्दैन लक्ष्मी माताको साथ !! - Nawalpur Dainik
घरमा यी ६ चिज राख्नले मिल्दैन लक्ष्मी माताको साथ !!
May 19, 2021 by Nawalpur Dainik
हामीलाई आकर्षित गर्ने धेरै वस्तुहरू हुन्छन् । घरलाई सुन्दर बनाउनका लागि हामी आकर्षक वस्तु घरमा सजाउँछौं तर त्यस्ता वस्तु घरमा राख्न जरूरी छ कि छैन भन्ने विचार गर्दैनौं । केही चीजहरू घरमा राख्दा एकदमै नराम्रो असर पुग्छ । तल लेखिएका ६ कुरा बिर्सेर पनि घरमा नराख्नुहोला ।
१ नटराजको मूर्ति:नटराज नृत्यकलाका देवता हुन् । धेरैजसो क्लासिकल डान्सरहरूको घरमा नटराजको मूर्ति राखिएको हुन्छ । तर नटराजको मूर्तिमा भगवान् शिव ताण्डव नृत्यको मुद्रामा देखिनुहुन्छ र यो विनाशको सूचक हो । त्यसैले यसलाई घरमा राख्नु अशुभ हुन्छ ।
२ ताजमहल:ताजमहल सुन्दर कलाकारिताको नमुना हो र यो प्रेमको पनि प्रतीक हो । यसको तस्वीर वा सानो प्रतिमालाई धेरैजनाले घरमा राख्ने गरेका छन् । तर ताजमहल मुमताजको चिहान पनि हो । यस्तो मृत्युको प्रतीकलाई घरमा राख्दा नकारात्मक ऊर्जा फैलिन्छ ।
३ डुब्दै गरेको जहाज:डुब्दै गरेको जहाजको चित्र घरमा राख्नुभयो भने तपाईंको सौभाग्य हराउँछ । यस्तो चित्र वा शोपीसले तपाईंका नातेदारसँगको सम्बन्ध बिगार्छ ।
४ जंगली जनावरको प्रतीक:आजकल जनावरहरूको कुनै सुन्दर शोपीस, खेलौना र गुडिया बजारमा पाइन्छन् । हेर्दाखेरी आकर्षक लाग्ने यस्ता शोपीसले तपाईंलाई हानि गर्छन् । यस्ता चीज घरमा राख्दा घरका सदस्यको स्वभाव उग्र हुन पुग्छ । अनि घरमा क्लेश र हिंसा बढ्छ ।
५ महाभारत ग्रन्थ वा तस्वीर:महाभारत हिन्दू धर्मको सबभन्दा महत्वपूर्ण ग्रन्थ हो । यो पूजनीय छ । तर यसलाई घरमा राख्नु अशुभ हुन्छ किनकि यसमा पारिवारिक झगडा र क्लेशको कथा भनिएको छ । यसलाई घरमा राख्दा झैझगडा र तनाव हुन सक्छ ।
६ शंखका साथ रथ:घरको पूजाकोठामा शंख राख्नु शुभ मानिन्छ । शंखको ध्वनिले घरमा सकारात्मक ऊर्जा ल्याउँछ । तर रथका साथ शंख राख्नुभयो भने अशुभ हुन्छ । रथको उपयोग पुरानो जमानामा युद्धहरूमा गरिन्थ्यो र शंखले युद्धको घोषणा गर्थ्यो । त्यसैले रथको शोपीसका साथ शंख नराख्नुहोला ।
यो पनि पढ्नुहोस् :शास्त्र अनुसार बुधबार यी कार्य गर्नुस् जीवनभर सुभफल प्राप्त हुन्छ !:हामीले कुनैपनि कार्य गर्दा बार अनुसार गरे हाम्रो जिवनमा धेरै राम्रो हुन्छ । बार अनुसार कार्य गर्दा हाम्रो जिवनमा आईपर्ने समस्याहरु हटेर जान्छ, जिवन सुखमय बन्छ । जस्तै कुनै कुरा कुनै बार गर्दा अशुभ हुने हुन्छ भने कुनै कुरा कुनै बार गर्दा शुभ हुने भएकोले हामीले केही कार्य गर्दा धर्मशास्त्र अनुसार बार हेरेर गरेमा हाम्रो जिवनमा शुभ फल प्राप्त हुन्छ ।
जस्तै बुधबार बुध ग्रहको लागि समर्पित गरिन्छ। यस दिन गरिने केही कर्मले जिन्दगी भरी शुभफल दिन्छ। बुधबार के गर्दा जिन्दगीमा सुख, शान्ति समृद्ध प्राप्त हुन्छ तल बताईएको छ ।
हिन्दु धर्ममा गाईलाई पूजनीय मानिन्छ। विशेषगरी बुधबार गाईलाई हरियो घाँस दिने व्यक्तिलाई सबै देवीदेवताको कृपा हुने गर्छ। – बुधबार मुंगको दाल दान गर्दा कष्ट निवारण हुन्छ। – जसको कुण्डलीमा बुध ग्रहको दोष छ खासगरी बुधबार गणेशलाई लड्डु चढाउनु फलदायी मानिन्छ।
बुधबार गणेश भगवानलाई सिन्दुर चढाउँदा मनले चिताएको पुग्ने विभिन्न् धार्मिक ग्रन्थहरुमा पाईन्छ । – बुधबार गणेश भगवानको पूजा गर्नु फलदायी मानिन्छ। मन्दिर वा घरैमा गणेश भगवान वा दुर्गालाई पूजा गर्दा छिट्टै शुभ खबर पाइनेछ।हामीले कुनैपनि कार्य गर्दा बार अनुसार गरे हाम्रो जिवनमा धेरै राम्रो हुन्छ ।
बार अनुसार कार्य गर्दा हाम्रो जिवनमा आईपर्ने समस्याहरु हटेर जान्छ, जिवन सुखमय बन्छ । जस्तै कुनै कुरा कुनै बार गर्दा अशुभ हुने हुन्छ भने कुनै कुरा कुनै बार गर्दा शुभ हुने भएकोले हामीले केही कार्य गर्दा धर्मशास्त्र अनुसार बार हेरेर गरेमा हाम्रो जिवनमा शुभ फल प्राप्त हुन्छ ।जस्तै बुधबार बुध ग्रहको लागि समर्पित गरिन्छ। यस दिन गरिने केही कर्मले जिन्दगी भरी शुभफल दिन्छ। बुधबार के गर्दा जिन्दगीमा सुख, शान्ति समृद्ध प्राप्त हुन्छ तल बताईएको छ ।
बुधबार गणेश भगवानलाई सिन्दुर चढाउँदा मनले चिताएको पुग्ने विभिन्न् धार्मिक ग्रन्थहरुमा पाईन्छ । – बुधबार गणेश भगवानको पूजा गर्नु फलदायी मानिन्छ। मन्दिर वा घरैमा गणेश भगवान वा दुर्गालाई पूजा गर्दा छिट्टै शुभ खबर पाइनेछ।
Prevस्वाद र औषधिले भरिपूर्ण अमलाको जुसमा पाईने फाईदाहरु जान्नुभयो भने तपाईंहरु खोजी खोजी खानुहुनेछ (भिडियाे हेर्नुस्)
Nextहरेक पुरुषले एक पटक पढ्नै पर्ने !